सरिताको पत्रकार सम्मेलनमा के भने करिष्मा, गौरी र रेखाले ? (भिडियोमा ) | Kendrabindu Nepal Online News
935022 47189 693844 193989
सरिताको पत्रकार सम्मेलनमा के भने करिष्मा, गौरी र रेखाले ? (भिडियोमा )
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २०:५९
आगामी जेठ २५ गते नेपाल चलचित्र कलाकार संघको साधारणसभा हुँदैछ । सो साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितीको छनौट गर्नेछ । जसमा दुई जना कलाकार अध्यक्षको चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । कलाकार सरिता लामिछाने र अभिनेता रवीन्द्र खड्दाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
अध्यक्षकी उम्मेदवार सरिताले चुनावी दौरानमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्दैै आएकी छन् । उनले चुनावी प्रतिस्पर्धाको तीन दिन अघि मतदाता भेट्दै र आफ्ना एजेन्डा सुनाउँदै चुनावी माहोल बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा आफूमाथि भएका ज्याजती सुनाउँदै हिड्नु परिरहेको बताएकी छन् ।
उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर थप कुरा स्पष्ट पारेकी छिन् । जसमा अग्रज कलाकारहरु करिष्मा मानन्धर, गौरी मल्ल, रेखा थापा लगायतको उपस्थिती थियो । उनीहरुले के भने त सो सम्मेलनमा ? अनि के भनिन् सरिताले त्यस्तो ? हेरौं यो भिडियोमा :
गौरी र रेखाले ? (भिडियोमा ), सरिताको पत्रकार सम्मेलनमा के भने करिष्मा
Prevआफैंले बनाएको संविधानमा प्रचण्डले देखाए यस्तो खोट (भिडियोमा)
पूर्व सिडिओको डरलाग्दो खुलासा ( भिडियो सहित)Next
डा. बाबुरामको प्रश्न, नागरिकको रक्षा गर्न नसक्ने सरकार नांगो कि मातृभूमि फर्किन ज्यान जोखिममा राखेर नदीमा हाम्फाल्ने ?
आफ्नो चलचित्रको ट्रोल बनाउनेमाथि खनिइन् धमला पत्नी एलिजा
बागलुङकी संक्रमित युवतीका परिवारमा कोरोना नभएको पुष्टि
इन्धनको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, नयाँ मूल्य कति ?
आज चैतेदशैं मनाइएकोदेखि इटालीमा ९ हजार स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमितसम्म (भिडियोसहित)
गायिका कनिका कपूर तनावमा, पाचौँ पटकको टेस्टमा पनि कोरोना पोजेटिभ
अर्थ मन्त्रालयद्वारा डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा